Ukutya kunye newayini ye-apple cider
Kwiminyaka yakutshanje, kukho intetho eninzi malunga nokuphumelela "kokutya okunomsoco", ngoncedo lwayo unako ukuhlahlela amahlanu kilogram ngeveki ngaphandle kwemimiselo kunye nemigudu. Ekugqibeleni koku, oku kukutya okulula, kufuneka nje uhlaziye iisipuni ezimbini ze-aple cider iviniga kwiglasi yamanzi uphuze amaxesha amane ngosuku. Ngelo xesha, isondlo siyancipha, intlungu isebenza, i-metabolism ikhawuleza. Kubonakala ngathi konke kulungile. Kodwa konke oku akunjalo kulula.
Kwezilwanyana ezithile, i-aple cider iviniga ingaba luncedo, ilawula i-acid-based metabolism, iphucula umsebenzi we-secretary wesisu. Njengomthetho, iinkqubo zokuxiliswa komzimba emzimbeni zikhuthazwa, zandisa ukwenziwa kakuhle, kukho ukuvakalelwa. Yaye ukuba ulahla u-5 kilogram ngeveki, isimo sengqondo siphucula kakhulu.
Kwindlela enjalo "yenkqubo yamandla, akusiyo yonke into ekhuselekile. Emva koko, i-aple cider iviniga iqukethe i-7% ye-asidi, iqala iinkqubo ezikhuthaza ukulahleka kwesisindo. I-Acid, ngaphandle kokusetyenziswa, i-asidi ingalimaza umzimba - uphawule i-kool ezinyo, yonakalise i-mucosa yesisu, iphazamise ukulinganisela kwe-acid-base.
Ngaphambi kokuba uhlale ekudleni okunjalo, qiniseka ukuba unempilweni - awunalo ukuvuvukala kweendonga zamathumbu, akukho zilonda ze-duodenum nesisu, akukho gastritis. Ukuba uneengxaki ezifanayo, ngoko, ukutya okungekho nto akuhambisani nawe.
Ukuba uqinisekile ukuba uphilile, kufuneka ulandele le mithetho:
Ukusela iviniga ehlambulukileyo.
Sebenzisa i-apula iviniga yemvelo, eyenziwe ekhaya.
Iviniga edibeneyo ayiyi kusela kwisisu esingenalutho, siphuze emva kokutya.
Emva kokusela iviniga, hlanza umlomo wakho ngamanzi, ngoko uya kukwazi ukuphepha iingxaki ngamazinyo akho.
Ukuba kukho naziphi iimpawu eziphazamisayo, siyeke ukuthatha iviniga kwaye uye kwi-polyclinic.
Imvakalelo engathandekiyo okanye intlungu esiswini, ukungabikho kwesidlo, isisongela, intlungu xa ucinezela esiswini, ukubhubhisa, kubonakala ngakwesokudla phantsi kweembambo ezibuhlungu.
Akukho mpendulo ngokwayo imilingo. Zonke izondlo ezicebisa izigulane ngokutya okucebileyo, zincoma ukusebenzisa i-aple cider iviniga, kunye nokutya okuthile. Umzekelo, kukho iipesele ezimbalwa, i-pasta, iimpahla ezibhakiweyo, isonka esimhlophe, ibhotela, inyama enamafutha kunye namafutha, kukho ukutya okuninzi, izithelo, imifuno, ulwandle kunye neentlanzi kunye nokusela amanzi anele amaminerali.
Ukulungiselela i-aple cider iviniga ekhaya
Iipilisi ze-peel, gubha kwi-grater enkulu. Umxube we-apula ufakwa kwisitya kwaye uhlanjululwe ngamanzi afudumele abilisiwe, kuthathwa i-800 g ye-aple slurry nganye ilitha yamanzi ukuongeza i-100 g yobusi okanye ushukela, kwaye ukwenzela ukuba ukhawuleze inkqubo yokuvumba ifake i-20 g yesonka sesonka okanye 10 g yemvubelo.
Emva koko, intombazana iboshwe nge-gauze kwaye ifakwe kwindawo efudumeleyo, inkqubo yokuvumba iya kugqiba kwiintsuku ezingama-60. Utyinayi kwaye uthule kwiibhotile, i-coork close close. Iviniga igcinwe kwiqondo lokushisa lama-degrees ayi-8.
Ngokugqithisa, i-aple cider iviniga igxila emva kokutya ii-2 teaspoon zeviniga zongezwa kwiglasi yamanzi, amaxesha amane ngosuku. Impembelelo ephawulekayo iza kufika kwiintsuku ezimbini, zichazwe emva kweminyaka emi-2.
Ndifuna ukubalumkisa abo bafuna iviniga ngokukhawuleza ukuba balahle iipounds zesilivere. Musa ukulibala ukuba iviniga kwindawo egciniweyo iya kuba yityhefu yomzimba. Ngoko ke, ngaphambi kokubeka iimvavanyo kwimpilo yakho, qhagamshelana nodokotela.
"Ukuthetha" i-gymnastics kwimpilo yabasetyhini
Indlela yokusebenzisa imidlalo ekhaya?
Zininzi iindlela zokuvuma uthando
Ukwenza i-yoga kunye nomyeni wam
Iimpawu zoSuku loMama-2016 kwisikolo sontanga, isikolo esiprayimari kunye nabafundi besikolo esiphakamileyo. Iimpawu ezimfutshane ezifutshane zoSuku loMama ngevidiyo
Inyama kwiibhotile ezinezambatho ezincinane: zokupheka okumnandi
Iindlela zokupheka eziphambili zokupheka i-shbab kebab
Iprokhor Chaliapin yavuka ekukhuseleni iVerka Serduchka
Ukuxilongwa kwe-Ultrasound kwi-trimester yokuqala yokukhulelwa
Iintyatyambo zeziqhamo ngeemalmond